Insimbi yethambo lesakhiwo esinezitezi eziningi ezinkampanini zezindiza zaseShenzhen iyafakwa
Ibhokisi lensimbi elibopha ibhuloho labahamba ngezinyawo
Indawo yokugcina impahla yensimbi yenziwa ngochungechunge lwensimbi, kufaka phakathi izinsika zensimbi, imishayo yensimbi, i-purlin njalonjalo. Lezi zinto eziyinhloko zakha isakhiwo esithwala imithwalo yokugcina impahla. Ngenxa yesisindo esincane nokwakhiwa okulula, kukhona okuhle ...
Amaphuzu abalulekile ekwakhiweni kwesakhiwo sensimbi
Uma kukhulunywa ngokwakhiwa kwesakhiwo sensimbi, ezinye izinto okufanele zicatshangelwe kufanele zenziwe kahle. Ukucatshangelwa kufaka phakathi kepha kungagcini kulokhu: ● Okungenacala: ukuvimbela ukuphuma kwamanzi emvula angaphandle angene ...
Izinhlobo zezinto zokwakha zensimbi
Izinsimbi ze-Arbon-manganese: Izithako ezinkulu zamakhemikhali yinsimbi, i-carbon, ne-manganese. Lezi zivame ukubizwa ngokuthi izinsimbi ezakhiwe kahle noma ama-carbon steels. Amandla nokuqina kuphezulu, futhi ukonga ngakho-ke kusetshenziswa kabanzi. Isigaba esidumile phakathi kwalolu hlobo yi-ASTM grade A36. T ...